Fairy chimneys: kedu ihe ha bụ na etu esi akpụ ha | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime ụwa dum, anyị nwere ike ịma usoro dị iche iche nke geomorphological nke mmalite dị iche iche. Offọdụ n'ime usoro ndị a nwere ihe dị iche na-eme ka ha bụrụ ihe na-atọ ụtọ ịmara. Taa, anyị ga-ekwu maka ya anwụrụ ọkụ anwụ. A na-eme ya bụ nkume dị nro nke sitere na ya.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ chimneys a na-akọ n’akụkụ na ihe bụ isi sekpụ ntị ha.
1 Kedu ihe bụ anwụrụ ọkụ
2 Akụkọ mgbe ochie na nkwenkwe ụgha
3 Mmalite nke anwụrụ ọkụ akụkọ
Kedu ihe bụ anwụrụ ọkụ
Ha bu usoro geomorphological nke emere site na okike di nro nke odi. A na-ahụkarị ha n'ọzara, ebe kpọrọ nkụ, mpaghara nwere ihu igwe akọrọ ma na-ekpo ọkụ ma nwee oke nha. Ma ọ bụ na e nwere anwụrụ anwụ akụrụngwa nwere ike tụọ mita ole na ole ruo ogologo nke ụlọ elu 10. Ihe niile dabere na mineral na okwute ndị a na-etinye na ya. E nwere ọtụtụ ụdị okwute na mineral nke enwere ike itinye na anwụrụ ọkụ a na nke na-eme ka ha dị iche na agba.
Otu n’ime anwụ anwụ ifuru anwụrụ ọkụ nke dị na ụwa bụ anwụrụ ọkụ anwụrụ ọkụ nke Kapadoshia, Turkey na nke Bryce Canyon National Park (Utah, United States). Ha niile ama ama nke ukwuu n'ihi ụdị ọdịdị ha. Ọ bụkwa na n'akụkọ ihe mere eme nile, ogidi ndị a sitere n'okike bụ isi mmalite nke ọtụtụ akụkọ ifo na nkwenkwe ụgha. Na ọdịnala oge ochie, a na-eche na ogidi ndị a nwere ihe ọ pụtara karịa usoro nhazi ala.
Akụkọ mgbe ochie na nkwenkwe ụgha
Otu n’ime anwụrụ ọkụ anwụrụ nwere akụkọ ifo na-atọ ụtọ bụ nke dị na Kapadoshia. Nke a na-akọ akụkọ akụkọ ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị biri na mpaghara ahụ, ya mere aha ya. Akụkọ mgbe ochie nwere ya site na ma nke ma umu, amachibidoro ịlụ machibidoro iwu. Nke a bụ ụkpụrụ a na-anaghị asọpụrụ n'ịma mma ya niile. Otu nwoke na otu ụbọchị nwere ịhụnanya miri emi nke na ha enweghị ike ịhapụ mmetụta ha ma ọ bụ zoo ha ọzọ. Ya mere, nwunye nwanyị a na-akọ akụkọ kpebiri iweta azịza gbara ọkpụrụkpụ. Ngwọta ya bụ ime ka ụmụ ifo niile dabara n'ịghọ kpalakwukwu. Nke a bụ otú m ga-esi wepụ ụmụ nwoke ikike ịhụ ha ruo mgbe ebighị ebi. Naanị olileanya dịịrị nwoke ahụ bụ ịnọnyere ndị kpalakwukwu ahụ site n'ilekọta akụkọ ifo ya.
Na Spain anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ anwụ anwụ anwụ anwụ na ndagwurugwu Ebro, ọkachasị na mpaghara Aragonese nke Cinco Villas. E nwekwara ha na mpaghara Aragonese nke Alto Gállego, n'otu ebe aha Señoritas de Arás; na mpaghara Campo de Daroca, na Biescas; na ọzara nke Bárdenas Reales, na Castildetierra.
Iji mata anwụrụ ọkụ anwụrụ anyị ga-enyocha ogologo ije, mana ha bara uru ịbịaru. Ọtụtụ ndị mmadụ na-aga ije wee were ohere nọrọ ụbọchị ahụ dum site na okike na ebe dị nso n'ụkpụrụ usoro ama ama ndị a.
Mmalite nke anwụrụ ọkụ akụkọ
Geology bụ sayensị abụghị naanị ọrụ maka ịmụ oge gara aga na usoro ọdịdị ala nke mere n'oge ndị ọzọ, kamakwa ịmụ ihe ndị na-eme taa ma na-aga n'ihu na-agbanwe ma gbanwee enyemaka ahụ kwa ụbọchị. Oke mmiri ozuzo bu otu n’ime ndi isi na acho igbanwe odida obodo. Mmiri ozuzo nwere ike ịmepụta mbuze na-aga n'ihu nke na-agbanwe odida obodo dịka anyị si mara ya. Eziokwu ahụ bụ na ala ndị ahụ na-agbanwe ma na-emebi emebi pụtara na ụdị ọdịdị ndị a dị iche iche nwere ike ịmalite.
A na-akpụ anwụrụ ọkụ site na njikọ nke ọtụtụ mmiri ozuzo na-eme ka mmiri na-aga n'ihu. Mmiri mmiri a na-adịgide adịgide na-echekwa maka oge dị mkpirikpi. Mgbe obere rivulets na-etolite n'ihi elu mmiri, ha na-agbadata na mkpọda ahụ niile ma na-anọgide na-arụ ọrụ n'ime ha. A na-akpọ grooves a gull. Dabere na ịkpọ okwu nke gullies na ọdịdị nke ala na mkpọda ugwu nwere ike ịmalite anwụ anwụ.
Maka anwụrụ ọkụ nke mmiri na-etolite, a chọrọ ala dị nro, mmiri ahụ nke na-asọpụta elu na-eweta ọmarịcha ihe omimi nakwa na mmiri a na-aga n'ihu oge na-agakarị. A ghaghi ikwu na ụdị ndị a dị iche iche na-eme ọtụtụ mgbe na ihe ndị na-ekwekọghị ekwekọ. Iji nwee oke nkenke ebe ị nwere ike ịmepụta ebe ọkụ ọkụ, ị ga-aga ebe aja jupụtara na ya nke nkume ndị kacha sie ike na-echedo n'elu. N'ụzọ dị otú a, a na-emezu na mmiri na-ada n'ala na ala ala ọ bụghị akụkụ nke elu.
Mmiri na-asọba bụ ọrụ maka ịdọrọ ihe ndị ahụ site n'akụkụ ya na n'ihi nke a, a na-emepụta ụdị ọdịdị nke elongated elongated. Formsdị ọdịdị geomorphological ndị a dị ka chaimsị nke Segovian pegueras. Ọ bụrụ na anyị enyochaa obere obere, anyị nwere ike ịhụ na usoro mmụta a na-abụkarị nanị centimita ole na ole. A na - ahụkarị pebbles ole na ole quartzite n’elu anwụrụ anwụ anwụ. Quartzite bụ ezigbo ịnweta. Nke a na-eme anyị ka anyị bibie n'elu ma nwee ike ịmalite anwụrụ ọkụ.
Ọbụghị naanị mmiri ozuzo nwere ọrụ dị mkpa na mbido anwụrụ ọkụ anwụ. Ifufe bụkwa onye na-ekpo ọkụ nke na-arụ ọrụ n'ọtụtụ na usoro usoro geomorphological ndị a. Anyị ga-enyocha ihe owuwu kachasị iche na ọtụtụ mita n'ogologo ma nwee ụda olu dị iche na nkume. Zọ ndị a bụ ngwaahịa nke ihe dị iche iche echekwara na nkume n'oge mbuze. N'aka ozo, dika a na-eke ala site na ntinye nke sedimenti, ikuku di nkpa.
Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro ndị a nwere akụkọ na-atọ ụtọ n’azụ ha na mmalite pụrụ iche. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkọ ifo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Fairy chim